Good sida scry in la ogaado saaxiibkiisa naf? (Tarot, falaga, reading oo timir ah, telepathy, sida jinni oo aad u aragto)
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Good sida scry in la ogaado saaxiibkiisa naf? (Tarot, falaga, reading oo timir ah, telepathy, sida jinni oo aad u aragto)
Tusaale ahaan, dadka lover hadda shukaansi doonayaan in ay ogaadaan in ama aan saaxiibkiisa naf of qaddar noqon lahaa badan. Dadka aan jeclahay hadda waxaan qabaa inaan sidoo kale doonayaan inay doonayaan inay noqdaan ay isku naf.
aanu ka soo baxay ma jawaabta xitaa la hadal dadka kale ee ku saabsan saaxiibkiisa nafta, haddii faal si aad u ogaato qaddar, naf saaxiibkiisa iyo markii si ay ula kulmaan, si aad u hesho joog ilaa iyo inta uu yahay waxa ay dadku sameeyaan. Haddii aadan hore u la kulmay ay isku naf, waxa kale oo aad ka faa'iidaysan karaan oo ka mid ah maal-sheegida si ay u diyaariyaan kulanka ka hadda. By
faal si aad u hesho macluumaad ah ee ay isku nafta, waxaa fududaan doonta in la helo lammaane. Dheeraad ah, in ay dhacdo haatan ee lover waa ay isku naf ma aha, in ay burburto, waxa kale oo aad go'aan ka gaari kara iyo in xaaladda hadda jirta waa waxa aad xaalkan ula maal-sheegistii. Dadka ayaa shukaansi
haatan iyo dadka ka welwelaysaa inay ogaadaan in ama aan saaxiibkiisa nafta, aynu si walba isticmaalaan maal-sheegistii. In
qayb caawimo si ay u raadiyaan muuqaalada iyo wehelkaaga of
faal kala duwan, waxaan qabaa waa maxay talo ah maal-sheegistii in la raadiyo saaxiibkiisa naf.
ayaa si weyn loo yaqaan kaadhka maal-sheegida waa kaar tarot ah. kaarka Tarot isticmaalaa card dhuray waa ka sawirka kala duwan, waa maxay nasiib rabaani ah by isku macnaha uu soo saaray ee sawirka iyo sare iyo hoose ee booska. By jar fasiraan macnaha kaarka, waxaad saadaalin karo oo ku saabsan saaxiibkiisa nafta.
falaga ka faahfaahsan ka badan horoscope ah, waa maxay rabbaani ah, oo ay ku jiraan xiriirka ka mid ah meerayaasha kala duwan. Magaca koox sida a calaamad, meerayaasha iyo calaamadaha xidhiidhka, ayaa sidoo kale u sheegista dabeecadda qofka iyo maal by xiriirka ka dhexeeya booska dhaw quraxda xidiga ah. Waayo, waxaa kale oo suuragal ah in ay sii saadaaliyo meesha ka meelayntu xiddigta, waxaad yeelan doontaa in aad xisaabiso waxa ay isku naf iyo marka meel la kulmeen.
- timireed reading
Waxaan qabaa ma aha dad badan ee halkaas wixii aad aragteen oo loogu talagalay khadadka guurka calaacasha. Khadadka Guurka, in ka hoose ee timirta ahaa oo farta yar ee line waa dhexeeya dareenka line, booska oo dhumucdiisuna waxay of line ah, at dhererka, iwm, waxaad u faaliyaan karaa waxa waqti ay nooca guur ku wareegsan. Intaa waxaa dheer, dadka qaabaynta ee akhriska iyo gacmaha oo timir ah oo la mid ah ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan waa wax macquul ah sare oo ay isku naf yihiin.
telepathy waxaa loogu tala galay in uu akhriyo mustaqbalka qofka iyo fakarka iyadoo la isticmaalayo dareen lixaad ka baxsan shan dareenka dadka. Awoodda, maxaa yeelay waxa ay sidoo kale dareemi kartaa ruxruxo naf saaxiibkiisa aad raadinayso ma dadka kaliya ee aad u hesho maal, waxaad ka heli kartaa natiijo sax ah maal-sheegistii. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad arki kartaa dareen ah in qofka la yaaban sida iskuma. Isticmaalka
? aragti ruuxiga ah
waxyoonay, waa aragti ruuxiga ah ee xaaladda in ay ahayd markii shishadiisa, iyo meel la visualized kartaa sida video ah. Ma aha oo kaliya in ruuxa dunida, sida dadka hadda iyo dhacdooyinka adduunka, waxaad ka arki kartaa la soo dhaafay, iyo mustaqbalka. Sidaas darteed, waxaad siin maal iyo in hadda ama la kulmay ay isku nafta, waxaa suuro gal ah in kulanka mustaqbalka. Waxaan dhihi karaa guud ahaan marka la hoos geliyey
maal-sheegistii in loo baahan yahay marka la helo ka
kala duwan maal-sheegistii, iyadoo ay sabab u maal-sheegistii by macalinka si ay u fuliyaan ay maal-sheegida waa in kala duwan. In badan oo ka mid ah maal-lagala baxo ayaa sidoo kale noqon a maal-sheegida ah si la mid ah, laga yaabaa in ay kiis kasta oo natiijadu waa kala duwan.
Intaa waxaa dheer, waa suurtowdaa aan natiijo wanaagsan ka soo bixi, laakiin aad uma baahna in ay ku dhici. Kaliya ka tagaa hayo tixraaca, waa sida isticmaalka talooyin maal-sheegistii soo qaado dhinaca natiijooyinka wanaagsan.
Waxaad saadaalin karaa. Intaa waxaa dheer, dadka qaabaynta ee akhriska iyo gacmaha oo timir ah oo la mid ah ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan waa wax macquul ah sare oo ay isku naf yihiin.